चीनले बनायो एकपटक चार्ज गर्दा ३०० किलोमिटर गुड्ने स्कुटर, ९० को स्पिड दिने, डबल डिस्क ब्रेक ! | आर्थिक अभियान
चीनले बनायो एकपटक चार्ज गर्दा ३०० किलोमिटर गुड्ने स्कुटर, ९० को स्पिड दिने, डबल डिस्क ब्रेक !
२०७९ बैशाख, २१
वैशाख २१, काठमाडौं। हाल बिश्व अटो बजारमा ईलेक्ट्रिक दूई पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको होडनै चलेको छ ।
इलेक्ट्रिक टू-व्हिलर निर्माता कम्पनीहरुले पावरफुल ब्याट्री निर्माणको गति पनि उत्तिकै बढाएका छन् । यस्तैमा ईलेक्ट्रिक बाईक निर्माता चिनियाँ कम्पनी हार्विनले आफ्नो पावरफुल म्याक्स-स्कुटर एसकेथ्री सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय ईलेक्ट्रिक स्कुटरमा आगलागिको समस्या रहेको र यसमा खासै कमी नआएको बताईन्छ । तर यसको उत्पादन तथा परीक्षणको काम भने रोकिएको छैन । सबै कम्पनीहरु आफ्ना उत्पादनलाई पावरफुल बनाउन तथा यसको रेञ्ज बढाउने तर्फ नै लागेका छन् ।
यसैमा चिनियाँ कम्पनी हार्विनले आफ्नो पावरफुल म्याक्स-स्कुटर एसकेथ्री यूरोपियन बजारमा सार्वजनिक गरेको हो ।
यो स्कुटर खासगरी लामो दुरीको यात्रा तय गर्न मिल्ने हिसाबले डिजाईन गरिएको बताईएको छ । कम्पनीका अनुसार यो स्कुटर सिंगल चार्जमा ३०० किलोमिटर सम्म गुड्न सक्छ । यसमा धेरै एड्भान्स फिचर समेत राखिएको छ।
सिंगल चार्जमा ३ सय किलोमिटरको रेञ्ज
न्यू हार्विन एसकेथ्रीमा ३.१ किलोवाटको इलेक्ट्रिक मोटर जडान गरिएको छ। यसमा ७२ भोल्ट ३६ एएचको क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्री प्याक जडान भएको छ ।
कम्पनीको भनाई अनुसार सिंगल चार्ज गरेपछि यो स्कुटरलाई ३०० किलोमिटर सम्म दौडाउन सकिन्छ । यसको फुल स्पिड ९० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ ।
यसमा स्मार्टफोन कनेक्टीभीटी तथा डूअल एलईडी हेडल्याम्प सहित टीएफटी ईन्स्टुमेन्ट कन्ट्रोल पनि राखिएको छ । यसलाई स्मार्ट फोनको सहायताले अन/अफ गर्न सकिन्छ ।
क्रुज कन्ट्रोल तथा डिस्कब्रेक
यसमा ड्राईभिङ ‌एक्सपिरियन्सलाई राम्रो बनाउन क्रुज कन्ट्रोल रहेको छ भने सुरक्षाको लागि डूअल डिस्क ब्रेक दिएको छ । यसको अगाडि तर्फ टेलिस्कोपिक फोर्क्स अथवा रियर र डुअलसक एब्जर्बसस्पेन्सन रहेको छ।
यूरोपीयन बजारमा यसको मूल्य ४ हजार ५०० यूरो रहेको छ । यो स्कुटर दूईपाङ्ग्रे साधनमा लामो यात्रा गर्न रुचाउनेहरुका लागि उपयुक्त हुने बताईएको छ । यसलाई बिश्वबजारमा कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने खुलाईएको छैन ।